Health & Living Archives - Page3of 267 - Media Nepal
यो १५ मिनेट सम्म उमाल्नुस् र दिनमा एक पटक प्रयोग गर्नुस्, २० दिनमा पाउनुस् यस्तो रिजल्ट !
आजभोली मोटोपनको समस्याबाट पिडित मानिसहरु धेरै छन् । यसबाट छुट्कारा पाउनको लागि मानिसहरु विभिन्न किसीमका प्रयासहरु गर्ने गर्छन् । आज हामी तपाईंलाई निकै नै राम्रो प्राकृतिक उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यो उपाय निकै नै सजिलो छ । र तपाईंले छिट्टै नै मोटोपनको समस्याबाट छुट्कारा पाउन सक्नुहुन्छ । आवश्यक सामाग्रीहरु: अदुवा ( सानो टुक्रा ) कागती ( १ वटा ) …
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र?जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन। तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।आफ्नो पर्स मा धनकी देवी माता लक्ष्मी को …
गर्मी सुरु भएसंगै पसिनाबाट उत्पन्न हुने समस्या बढ्छ । यसको लागी कतिपयले विभिन्न बडी स्प्रे तथा पर्फ्युको प्रयोग गर्दछन् भने कतिले नियमित नुहाउनु, पानी पिउने अनि सन्तुलिन भोजनमा ध्यान दिने गर्दछन् । गर्मीमा देखा पर्ने अर्को एउटा समस्या हो जुत्ताबाट आउने गन्ध । अफिस होस् या घर जुत्ताबाट खुट्टा निकाल्दा वित्तिकै नराम्रो गन्ध आउँन थाल्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो गन्हाउने …
रातारात तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ आश्चर्यजनक प्राकृतिक उपाय; जस्ले सजिलै काट्छ बोसो
आज हामी तपाइँलाई तौल घटाउने प्राकृतिक उपायबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले तपाइँको पेटको बोसोलाई सजिलै हटाउन सक्छ । मात्र २ हप्तामै यसको प्रयोगबाट राम्रो परिणाम मिल्दछ । यसको लागि तपाइँले नियमित रुपमा प्रयोग गर्नु जरुरी छ । यो उपाय धेरै नै सजिलो छ । तौल घटाउनको लागि निम्न सामाग्रीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन तौल घटाउनको लागि मात्र नभई हाम्रो …
आजभोलि केटि अथवा महिलाहरु धेरै आधुनिक ड्रेसअप गर्ने र राम्रो देखिनको लागि शरीरका रौँहरु पनि हटाउने गर्दछन् । त्यसैगरी अजकलका युवतीहरु गर्मीमा छोटा कपडा लगाएर शोअप भनौं या खुलेर हिड्न रुचाउने गर्छन्। यस्ता खालका कपडाहरु लगाउँदा उनीहरुको काखीमा हुने कालोपन र रौ देखिने तथा पसिना आउने हुँदा आफुलाई अरुको अगाडी निकै लज्जित भएको महसुस गर्ने गर्छन । काखीमा कालो दागी …
युरिक एसिड बढ्नुलाई चलनचल्तीको भाषामा यसलाई बाथ रोग भनिन्छ । जब शरीरमा युरिक एसिड बढ्छ, हाम्रो जोर्नी दुख्न थाल्छ । कतिपय अवस्थामा त हिँडडुल गर्नै गाह्रो हुन्छ । शरीरमा प्युरिन नामक तत्व टुक्रन्छ, तब शरीरमा युरिक एसिडको समस्या देखिन्छ । शरीरका कोषिका टुट्ने नयाँ बन्न प्रकृया चलिरहदाँ त्यसमा पाइने प्युरिन पनि टुट्न थाल्छ । प्युरिन टुक्रनाले शरीरमा रसायनिक असर देखा …
मकैजस्तै गुनिलो मकैको जुँगाको यस्तो फाइदै फाइदा
मकै संसारमा सबै भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लगाईने तथा सबै भन्दा धेरै खपत हुने बालीमा पर्दछ। त्यसै खेर फालिने मकैको जुँगा पनि एकदमै काम लाग्छ ।बहु उपयोगि, यो बाली बाट, बिभिन्न परिकार, तेल, इन्धन, चीनी, रक्सी आदि बनाउने गरिन्छ । धेरै मानिसहरुले उसिनिएका मकै वा पोलिएका मकै खान मन पराउंछन् । यस किसिमका मकै खाएमा स्वास्थ्यका लागि के के फाइदा हुन्छ …